Sary Tsotra Hanehoana Ny Teritery Ara-politika Ao Thailand · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Febroary 2015 4:22 GMT
Vakio amin'ny teny Français, čeština , Español, فارسی, polski, македонски, বাংলা, 日本語, English
Sary nalefan'i Prachatai, fampiasàna nahazoana alàlana.
Ity sary fampahafantarana eto ambony ity, noforonin'ny tranonkalam-baovao tsy miankina Prachatai, dia manome topimaso amin'ny zava-misy amin'izao fotoana izao ao Thailand, izay ny tafika no eo amin'ny fitondràna hatramin'ny taona lasa, taorian'ny nanaovany fanonganam-panjakana.
Ny miaramila ao Thailand, tarihan'ny Jeneraly Prayut Chan-o-cha, no naka ny fahefana tamin'ny alàlan'ny fanonganam-panjakana tamin'ny volama May lasa iny, ary nametraka ny lalàna miaramila ho an'ny firenena iray manontolo taty aoriana kely. Ny tafika koa no nampihantona ny lalàm-panorenana, nitazona am-ponja ireo mpitarka ara-politika, nametraka fanarahamaso henjana amin'ny media, ary nandràra ny hetsi-panoherana ho an'ny daholobe.
Nolazain'ny tafika fa nilaina ilay fanonganam-panjakana mba hamerenana ny fahamarinan-toerana sy hampitsaharana ireo fifandonana henjana eny an'arabe ifanaovan'ireo hery politika isankarazany. Nanome toky izy ireo fa hamerina ny fitondràna sivily, saingy aorian'ny fametrahana fanavoazana vitsivisy amin'ny resaka politika sy fifidianana.
Lalàm-panorenana iray vonjimaika no nankatoavina tamin'ny volana Aogositra lasa teo, narahan'ny fanendrena ireo manampahefana sivily tohanan'ny tafika tarihan'ny Jeneraly Prayut, izay praiminisitry ny firenena amin'izao fotoana izao. Napetraka ihany koa ny rantsana mpanao lalàna, izay ny tafika no nanendry ireo rehetra mpikambana ao anatiny.
Hatramin'ny andro voalohan'ilay fanonganam.panjakana, nanohitra ny didy jadon'ny tafika ireo Thai mpikatroka mafàna fo. Nanomboka teo dia nanatevina laharana ireo mpikatroka mafàna fo eo amin'ny firenena ireo olom-pirenena tsotra, tamin'ny fitakiana ny famerenana mametraka ny fifidianana sy ny zo demaokratika hafa. Ny valintenin'ny fitondràna miaramila dia ny famonjàna ireo mpanao hetsi-panoherana ary mampihatra ny fitsaboana “fanitsiana fomba fihetsika” ho an'ireo be fanakianana.
Nefa kosa ry zareo Thai naka ireo fitaovana ahafaha-manao asa famoronana hanehoana ny hevitra tsy mitovy. Satria voaràra ny fivorivorian'olona dimy na mihoatra, amin'ny fomba an-kolaka no anehoan'ny tsirairay ny hafatra avy amin'izy ireo, toy ny famakiana ny tantara nosoratan'i George Orwell 1984 eny ambony lamasinina, fakàna tàhaka ny fomba fiarahàban'ny Hunger Games amin'ny rantsana telo, ary ny fihiràna ny hiram-pirenena Frantsay.
Ny sary nataon'i Prachatai dia manao lisitra ireo hetsika mahazatra izay nofoanan'ireo manampahefana tato anatin'ny sivy volana farany. Nosamborina noho ny “fanohintohinana ny fialaminam-pirenena ao Thailand izay olona “nanatanteraka” ireny hetsika ireny. Tafalentika lalina ny aretin-tsaina “tsy tia mainty” ao amin'ny fitondràna miaramila.
fitazonana taratasy fotsy A4 na taratasy A4 misy hafatra manohitra ny fanonganam-panjakana
ny fanampenana tava, na maso, na vava ataon'ny olona iray
ny fanampiana ireo mpanao hetsi-panoherana voasambotra
ny fihazonana T-Shirt misy soratra “Peace Please” (Fandriampahalemana azafady)
fakàna tàhaka ny fomba fiarahaba mampiasa rantsana telo an'ny Hunger Games
mifamorivory eo amin'ny McDonald’s
ny mamaky ny tantara 1984 nosoratan'i George Orwell’s
ny mihinana sandwiches eny imasom-bahoaka
ny mihira ny hiram-pirenena Frantsay.
ny mitafy akanjobà Mena rehefa mivarotra calmars voaendy
ny famoahana fanambaràna manohitra ny fanonganam-panjakàna
ny fitondràna sarontava “people”
ny fitafiana T-Shirt misy soratra “hajao ny vatoko”
ny fanatonanao na ny fanatonan'ny mpanao gazety anao
ny fihazakazahana ho an'ny demaokrasia
ny filanjàna takelaka mivaky hoe “tsy heloka bevava ny fitazonana takelaka”
ny fandefasana saripika miaty hafatra manohitra ny fitondrana miaramila sy ny “Tsy Mila Lalàna Miaramila” ao amin'ny Facebook
ny fanaovana seminera eny amin'ny anjerimanontolo hiresahana ny teo-draharaha politika
ny famoriana olona hijery ny fandefàsana voalohany ny Hunger Games 3
ny fanapariahana trakitra miaty tononkalo momba ny demaokrasia
ny fanolorana fiarahabana amin'ny rantsana telo ho an'i Prayuth, lehiben'ny fitondrana miaramila
ny fivarotana voankazo ahitàna ny fango misy ny endriky Thaksin Shinawatra (praiminisitra teo aloha)
Araka ny lazain'ny Prachatai, ny fanafoanan'ny fitondràna miaramila ny zo ho afaka maneho hevitra an-kalalahana dia fangejàna bebe kokoa ataon'ny fitondràna amin'ny vahoaka:
Na dia niteraka fangovitana, fisamborana, famonjàna sy fanenjehana avy amin'ny tafika azy ireny hetsika manohitra ny fitondrana miaramila ireny, tsy manao afa-tsy ny manosika bebe kokoa ny vahoaka hanohitra ny fitondràna ireo fepetra faran'izay henjana ataon'ny fitondrana miaramila hanapenam-bava sy hamoretana azy tsy ho afaka hampiasa tsotra fotsiny ny zo fototra ananan'izy ireo.